डिग्री पास गरेका दिदिबहिनी तरकारी खेतीमा ! भन्छन् – ‘मलाई अमेरिका यही जापान पनि यही’ (हेर्नुस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > डिग्री पास गरेका दिदिबहिनी तरकारी खेतीमा ! भन्छन् – ‘मलाई अमेरिका यही जापान पनि यही’ (हेर्नुस् भिडियो)
भक्तपुरको सिरुटारमा गीता रिजालले बहिनी पार्वतीसँग मिलेर तरकारी खेती गरेको सात वर्ष भयो । १० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी फलाउँदै गीताले स्नातकोत्तर सकिन् । पार्वती भने स्नातक अन्तिम वर्षमा छिन् उनीहरूले भाइलाई समेत पढाइरहेका छन् । बस्नलाई उनीहरूले फार्मको बीचमा सानो छाप्रो बनाएका छन् । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
रिजाल दिदी बहिनीको व्यवसायिक तरकारी खेति तलको भिडियोमा हेर्नुस् :
फेसबुकमा महिलाहरुलाई यस्तो गफ गरेर पैसा कमाउने यी व्यक्तिलाई सबैले चिन्नुहोस्
भर्खरै आयो बर्दियाबाट बस दुर्घटनाको यस्तो दुःखद खबर
भर्खरै नेपालमा फेरि ९ जनामा कोरोना संक्रमण भएकाे पुष्टि!!